के ईराकमा आइसील पराजित भएकै हो त ? « LiveMandu
के ईराकमा आइसील पराजित भएकै हो त ?
१० चैत्र २०७५, आईतवार १४:२५
द इस्लामीक स्टेट अफ ईराक एण्ड द लिभेन्टले एकजमानामा सिरिया र ईराकमा कव्जा गरेको भूमि आजको ग्रेट बिट्रेनको भूभाग भन्दा धेरै थियो भनी अलजजिराले लेखेको छ । उतिबखत आइसीलले करोडौंको सख्याँमा मान्छेहरुलाई इस्लामीक कानुन लगाएको र शाषन गरेको थियो ।
२ वर्षअघि यस समुहलाई ईराकबाट हटाएर सिरियामा मात्र केन्द्र राखेर बसेका थिए तर अब सिरियाबाट पनि क्रमश आइसील हट्दै जानुपरेको रिपोर्ट छ । गत शनिवार अमेरिकी फाइटर प्लेन पाइलटहरुले बगौज शहरबाट पनि आइसील योद्धाहरुलाई पछाडि सारेपछि अब सिरियामा आइसीलहरुको कब्जा सकिएको घोषणा गरेका छन् ।
कुर्दिश नेतृत्वको सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेसले बगौजमा आफ्नो झण्डा लहराएको बताइन्छ । हुन त भूभागका हिसाबले आइसील अब बमजोर भएपनि धारणा र दर्शनका रुपमा आइसीललाई पछ्याउने मानिसहरु भनें धेरै भएको बताइन्छ । के आइसील अब साँच्चै पराजित भएको छ त? यो प्रश्नको यथार्थ उत्तर आज राजनितीको धमिलो धूवाँमा लुकेको छ । सिरियाका शहरहरुमा चाँही आइसीलको कब्जा नभएपनि गाँउगाँउमा र गाँउले मानिसको मनमा भनें आइसीलको अझै पनि पक्कड रहेको अलजजिरा लेख्दछ । आइसीलको भूभाग कम भएपनि पक्कड कम नभएको र अमेरिकाले अब सर्जिकल स्ट्राइक नभई सिरियनको सोच र बिचारमा पनि परिवर्तन गराउनुपर्ने विष्लेषकहरुको भनाँई छ ।
तर नेपथ्यको चित्र जस्तो भएपनि आजको दिनमा आइसीलको भूभागमाथिको कब्जा र आइसील योद्धाहरुको भागदौडमा भनें निकै कमी आएको छ ।